Kuzohlonzwa ezamagugu | News24
IZITHOMBE: zithunyelweOwabe engumeya wamasipala wasoGwini uSithembiso Chiliza (kwesobunxele) ebonisana noMondli Ngcobo kanye noMfanafuthi Ngwabe
IHHOVISI likaNdunankulu esifundazweni saKwaZulu-Natali libambisene nomasipala wasoGwini libambe ingqungquthela ngoLwesihlanu olwedlule ehholo lomphakathi laseMargate. Lapha kudingidwe ukuthi kungenziwa kanjani ukuze kuhlonzwe izindawo ezingasetshenziswa njengezamagugu kulesisifunda.
Lomcimbi ubuhanjelwe izithunywa ebeziphuma esifundaweni kanye nabaholi bomasipala ngokwahlukahlukana kwabo.
Okufike kwagqama ngesikhathi kwethulwa izinkulumo ngukuthi isikhathi esiningi izinto ezingamagugu zabantu abamnyama azithathelwa phezulu bese kuthi lezo zalabo bebala kube izona ezihanjiswa phambili.
UMhloshana Zulu uveze ukuthi ziningi izindawo zamagugu kodwa zibukeka zinganakiwe ikakhulukazi ilabo okumele engabe bayazisebenzisa.
Kulengqungquthela kube sekuthathwa isinqumo sokuba kuzosethsenziswana namakhosi kanye nabasezinhlakeni ezifanele ukuze kuhlonzwe lezizindawo futhi zisetshenziswe ukuthuthukisa ezokuvakasha kanye nokuqhakambisa amagugu alesisifunda